होमपेज / कला / नेपाली फिल्म / फेसबुकमा निशाको खण्डन - मेरो गाइडको निधन भएको छैन
फेसबुकमा निशाको खण्डन - मेरो गाइडको निधन भएको छैन	14 May 2013 | 09:29am मङ्गलबार ३१ बैशाख, २०७०
काठमाडौ – अभिनेत्री निशा अधिकारीले आफूलार्ई सगरमाथा आरोहण गराउने गाइडको निधन भएको भन्ने खबर खण्डन गरेकी छिन्। सगरमाथाको तेस्रो शिविरमा पुगेकी निशाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत समाचारको खण्डन गरेकी हुन्। बिहीबार न्युज एजेन्सीले उनको गाइड भनिने २५ वर्षिय फुलोप्साङ शेर्पाको मंगलबार सगरमाथाको दोस्रो र तेस्रो शिविरको विचमा निधन भएको समाचार प्रकाशन गरेको थियो। 'यो समाचारले मलाई स्तब्ध बनाएको छ। मेरो गाइडको नाम जाग्मु हो। उनको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ र सगरमाथामा कमरमाथिको लुगाबिनै ४५ सेकेन्ड बिताउने रेकर्ड राखेका छन्।'सगरमाथामा शेर्पाहरुले गर्ने दुःखप्रति उनले आभार समेत व्यक्त गरेकी छिन्। 'अर्जुन दाईको पनि शेर्पा गाइड छन्। उनको स्वास्थ्य अवस्थापनि राम्रो छ। कुनै व्यक्तिको मृत्युको खबरलाई गसिप बनाउने शैली जायज होइन। हिमालमा शेर्पाहरुको जीवन डरलाग्दो हुन्छ। उनीहरुले बिहान बेलुका हाम्रो सुरक्षाको लागि काम गर्छन्। हाई अल्टिच्युटमा सामान बोक्नेदेखि खाना, टेन्डदेखि बाटो देखाउने कामसम्मको जिम्मेवारी उनीहरुमा हुन्छ। उनीहरु बिना यहाँ केही सम्भव छैन,' उनले लेखेकी छिन्।राजधानी आएलगत्तै यस समाचारबारे प्रकाशन गृहसँग खण्डनको अपेक्षा गरेकी छिन्। 'यस समाचारले मेरो र अर्जुन दाईको परिवार र शुभचिन्तकलाई कस्तो असर गर्छ? यसवर्ष हाम्रो चार साथीहरुले सगरमाथामा ज्यान घुमाइसकेका छन्। हामी मौसम सुधारिने प्रतिक्षामा छांै। यस्तो समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रकार र प्रकाशन गृहप्रति मेरो गुनासो छ। समाचार प्रकाशन गर्नुअघि सत्य कुराबारे जानकारी किन राखिदैन्?' उनले प्रश्न गरेकी छिन्। « नेपाली फिल्ममा साउथकी हिरोइन
बक्सअफिस १५ दिनमा, हप्तामा दुई वटा फिल्ममात्रै रिलिज »